International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Press Release: Update on Progress of Response by Myanmar Civil Society Organizations on Draft Association Law
Press Release: Update on Progress of Response by Myanmar Civil Society Organizations on Draft Association Law
Update on Progress of Response by Myanmar Civil Society Organizations on Draft Association Law
By Delegation of CSO Representatives to Naypyidaw on Draft Association Law
On 27 July 2013, draft Association Law prepared by Public Affair Management Committee (PAMC) of the People Assembly was published withanotice for the public to study and comment before it is submitted to the parliament for discussion. On 31 July, Civil Society Organizations (CSOs) from Yangon and Mandalay held workshops in their own respective areas. Participants exchanged their positions on the draft law and discussed their views and what they wish to do about each section and article.
21 CSO representatives, 13 from Yangon and 8 from Mandalay, were elected during the workshops to meet with the PAMC that drafted the law, Ministry of Home Affairs, and officials from other related committees and commissions to discuss CSO positions and recommendations on the draft law.
CSO representatives met U Tin Maung Oo, Secretary of PAMC and other members of the committee; officials from Legal Affair and Special Affair Assessment Commission in the PAMC's office from 11 am to2pm on2August and discussed with them CSO perspectives on recently published "Draft Association Law".
Discussion by CSO representativeson its positions
We, representatives of the Civil Society Organization, see that current draft law undermines the development of civil society and is written inaway that put restriction on civil society in the name of security.
We see that civil society organizations exist in different forms and natures and this law is an attempt to putablanket control on all CSOs under one law.
We believe that current draft law withdraws Freedom of Association granted by Article 354 (c) of the Constitution and believe the law should allow organizations to be formed freely and leaves registration up to the organizations to decide whether they want to or see isaneed to do so.
We suggest that the law should be drafted only after consultation with the civil society.
We urge that the "punishment" clause be removed if the law is genuinely intended to support the development of the CSOs.
We recommend that drafting and discussion on the current draft law not be rushed and sufficient time be allocated for broad consultation with CSOs.
We reiterate that if the law is enacted in its current form the ongoing joint collaboration works between the State and CSOs would be terminated and community-based organizations, social support organizations, humanitarian and emergency relief organizations, volunteer organizations, cultural organizations as well as CSOs that are providing social support services with genuine compassion will become victims for automatically violating the law; for example, if the law is approved in its current form, social security programs such as education, health and childcare services andawide range of other sectors such as peace process, transparency, Human Rights, Civil rights, anti-corruption, voter education services, and Election monitoring will be terminated.
There are fundamental rights of civil society organizations that the government ofademocratic country must guarantee and this draft law fails to do so.
Therefore, we reinstated that we oppose this draft law and urge any discussion and approval process of the draft law to be suspended
Discussion by the Public Affair Management Committee on its position
PAMC explained that
the People Assembly always prioritize the need of the people in drafting the laws; and PAMC similarly drafted the Association Law with the intention of promoting and strengthening CSOs;
the parliament (and the Committee's) weakness is that it has little experiences in legislation
current draft law is not yet approved and CSOs can still discuss and propose amendments to the law
CSOs can submit recommendations by August9since the draft law is queued to be forwarded to the ongoing Seventh Session of the First People Assembly; recommendations on the title, each sections and articles can be made with reasons of explanation.
the committee is welling to invite Representatives of the People Assembly and arrange their participation inaworkshop for discussion with CSOs on the draft law
current procedure is that the draft law would be forwarded to the Bill Committee, People Assembly and then to the Union Assembly where discussions and decisions would be made.
For more information please contact - Khin Lay: +95 (0)9 730 37727, Nwel Zin Win: +95 (0)9 503 1246, Han Zar Maung +95 (0)9 518 2211; Email: info-co@lrcmyanmar.org
Download the Statement on Association Law (draft bill) endorsed by 87 Civil Society Organizations in Burmese and English.
၄ ရက် သြဂုတ်လ ၂၀၁၃
ဇူလိုင်လ၂၇ရက်နေ့က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီက ရေးဆွဲထားသော အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းကို လွှတ်တော်များ တွင်ဆွေးနွေး အတည်မပြုမီ ပြည်သူအများလေ့လာအကြံပြုနိုင် ရန်အတွက် ထည့်သွင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ရက်နေ့က ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမြို့တို့တွင် ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သော အလုပ်ရုံအစည်းအဝေးများခေါ်ယူခဲ့ပြီး ထိုဥပဒေကြမ်းအပေါ်ထားရှိသော သဘောထားနှင့်ထိုဥပဒေကြမ်း၏ အခန်းအလိုက်၊အပိုဒ်အလိုက် ဖော်ပြထားမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတို့၏ အမြင်များနှင့် လိုလားချက်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် `အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း´ နှင့်ပတ်သက်ပြီး အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကို ဇူလိုင်လ၃၁ရက်ရက်စွဲဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ (လက်ရှိအချိန်အထိ ထိုသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း၈၀ထက်မနည်း သဘောတူထောက်ခံထားပြီး ဖြစ်ပါသည်)
ထိုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင် အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး နေပြည်တော်တွင်ဥပဒေကြမ်းကို ရေးဆွဲတင်သွင်းသော `ပြည်သူ့ရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ´နှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာရေးရာကော် မတီ၊ ကော်မရှင်များမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံပြီးအရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဥပဒေကြမ်း အပေါ်သဘောထားနှင့် အကြံပြုချက်များကို သွားရောက်ဆွေးနွေးရန် အတွက် ကိုယ်စားလှယ်များကိုလည်း ရွေးချယ်ခဲ့ ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့မှ၁၃ယောက်နှင့် မန္တလေးမြို့မှ၈ယောက် စုစုပေါင်း ၂၁ယောက်နေပြည်တော်သို့ သွားရောက်ခဲ့ ပါသည်။
သြဂုတ်လ၂ရက်နေ့ နေ့လည်၁၁နာရီမှ ၂နာရီခန့်အထိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အတွင်းရှိ ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ရုံးခန်းတွင် ပြည်သူ့ရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးဦးတင်မောင်ဦး (ဥပဒေကြမ်းကို အဆိုတင်သွင်းသူ) နှင့်အခြားကော်မတီဝင်များ ၊ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ ဥပဒေနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များ ဆန်းစစ်လေ့လာ သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်မှတာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး လက်ရှိ ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသော `အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း´ နှင့်ပတ်သက်ပြီး အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အမြင်များကိုဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။
၁။ လက်ရှိဥပဒေကြမ်းသည် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကိုရှေ့မရှုပဲ လုံခြုံရေးနှင့်အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များကို ထိန်းချုပ်ရေး အတွက် ဇောင်းပေးပြီးရေး ဆွဲထားသည်ဟု ရှုမြင်ပါသည်။
၂။ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း အသင်းအဖွဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုး ၊သဘာဝ အမျိုးမျိုးကွဲပြားစုံလင်စွာရှိနေရာ အားလုံးကို သိမ်းကျုံးခြုံငုံပြီး ဥပဒေ တစ်ခုတည်းအောက်တွင် သွတ်သွင်းရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ရှုမြင်ပါသည်။
၃။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပိုဒ်၃၅၄အပိုဒ်ခွဲ (ဂ) တွင်ပေးအပ်ထားသော လွတ်လပ်စွာသင်းပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်ကိုလည်း ယခုဥပဒေကြမ်းက ပြန်လည် ကန့်သတ်ထား သည်ဟု ရှုမြင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်အသင်းအဖွဲ့များကို လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုသင့်ပြီး မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သော/ မှတ်ပုံတင် လိုသောအသင်းအဖွဲ့များအတွက်သာ မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်ပြဋ္ဌာန်းသော ဥပဒေမျိုးဖြစ်သင့်ကြောင်းယူဆသည်။
၄။ လက်ရှိဥပဒေကြမ်းကိုရေးဆွဲရာတွင်လည်း အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှရေးဆွဲသင့်ကြောင်း အကြံပြုသည်။
၅။ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အမှန်တကယ် ရည်သန်ပါက ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်အခန်းကို ထည့်သွင်းခြင်းမပြုရန်လည်း တောင်းဆိုသည်။
၆။ ဥပဒေကြမ်းကိုအလျင်စလိုရေးဆွဲခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းမပြုပဲ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တိုင်ပင်ပြီး သဘောထား ရယူနိုင်ရန်အတွက် သင့်လျော်သောအချိန်ကိုပေးပြီး ဆောင်ရွက်ရန် လိုကြောင်းအကြံပြုသည်။
၇။ လက်ရှိဥပဒေကြမ်းကို အတင်းအကြပ်အတည်ပြုပြဌာန်းခြင်းဆောင် ရွက်မည်ဆိုပါက လက်ရှိမြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်းရှိနေကြသော ရပ်ရွာအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုကူညီထောက်ပံ့ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားရေးနှင့် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းများ၊ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာအရ ရှိနေသောအဖွဲ့အစည်းများ၊ လက်ရှိနိုင်ငံတော်နှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ လက်တွဲဆောင် ရွက်နေကြသောလုပ်ငန်းများ အားလုံး ရပ်ဆိုင်းသွားနိုင်ပြီး၊ ပင်ကိုယ်စိတ်ရင်း စေတနာဖြင့်လူမှုရေးလုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်နေသူများ၊ အဖွဲ့များအနေဖြင့်လည်း ဥပဒေချိုးဖောက် သူများဘ၀ကို အလိုအလျောက်ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဥပမာ - ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကဲ့သို့သော လူမှုဖူလုံရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေး၊ ရွေးကောက် ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကဲ့သို့သော ကဏ္ဍအသီးသီး တွင်လည်း အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍကို ပစ်ပယ်၍မရသောကြောင့် ဤဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုပြဌာန်းမည်ဆိုပါက ထိုလုပ်ငန်းများအားလုံး ရပ်တံ့သွားမည်ဖြစ်သည်။
၈။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင်လည်း အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ အတွက်နိုင်ငံတော်မှအာမခံချက်ပေးရမည့်အခြေခံရပိုင်ခွင့်များရှိပါသည်။ထိုအချက်များကိုလည်း ယခုဥပဒေကြမ်းမှအာမခံပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
၉။ ယခုဥပဒေကြမ်းကိုကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် ဥပဒေကြမ်းကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးခြင်းအတည်ပြုခြင်းများအား ဆိုင်းငံ့ထားပေးပါ ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
၁။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အနေနှင့် ဥပဒေများကိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရာတွင် ပြည်သူအများ၏လိုအပ်ချက်ကိုထင်ဟပ်နိုင်စေရန် အဓိကဦးစားပေးပြီး ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အနေနှင့်လည်း ယခု `အသင်းအဖွဲ့ များဆိုင်ရာဥပဒေ´ကိုရေးဆွဲရာတွင် အသင်းအဖွဲ့များဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အားကောင်းရေး အတွက်ရည်သန်ပြီး ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း
၂။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အနေနှင့် (ကော်မတီအနေနှင့်) လည်း ဥပဒေပြုမှု ပိုင်းဆိုင်ရာများတွင် အားနည်းချက်များ၊ အတွေ့အကြုံ နည်းပါးမှုများ ရှိပါကြောင်း
၃။ လက်ရှိရေးဆွဲထုတ်ပြန်ထားသောဥပဒေကြမ်းသည် အတည် မဟုတ်သေးပဲ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် လိုသည်များကို အကြံပြုဆွေးနွေးနိုင်ပါကြောင်း
၄။ ကော်မတီအနေနှင့် လက်ရှိပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး၊ သတ္တမဆက်ရှင်အတွင်း (ယခုသြဂုတ်လမကုန်မီ) ဥပဒေကြမ်းကိုတင်သွင်းရန် ရှိသဖြင့် သြဂုတ်လ၉ရက်မတိုင်မီ အကြံပြုချက်များကို ပေးပို့နိုင်ပါကြောင်း၊ ဥပဒေကြမ်းကို ခေါင်းစဉ်ကအစ တစ်ခန်းခြင်း၊ အပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ခြင်း ကြောင်းကျိုးပြ ချက်နှင့် တကွ အကြံပြုဆွေးနွေးနိုင်ပါကြောင်း
၅။ ကော်မတီအနေနှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ (ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန) တွေ့ဆုံပြီး ထိုဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးဖလှယ်နိုင်မည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု ကိုလည်း သြဂုတ်လတတိယပတ်အတွင်း ကျင်းပနိုင်ရန်စီစဉ်ဖိတ်ကြားပေးနိုင် ပါကြောင်း
၆။ ဥပဒေကြမ်းအဆင့်ဆင့်တင်သွင်းခြင်းဖြစ်စဉ်အဖြစ် ပြည်သူ့ရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၊ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်စသဖြင့် အဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းကို လည်း ရှင်းလင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန် - မခင်လေး +၉၅ (၀)၉ ၇၃၀ ၃၇၇၂၇ မနွယ်ဇင်ဝင်း +၉၅ (၀)၉ ၅၀၃ ၁၂၄၆ ကိုဟန်ဇာမောင် +၉၅ (၀)၉ ၅၁၈ ၂၂၁၁ အီးမေလ်း - info-co@lrcmyanmar.org
အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၈၇ ဖွဲ့မှ ထောက်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့ အစည်းများ၏သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် မြန်မာဘာသာ နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ တို့ကို ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။
Thein Sein's Words Must be Followed by Action